मोदीलाइ बधाइ दिन दिल्ली आइपुगे प्रधानमन्त्री ओली - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
मोदीलाइ बधाइ दिन दिल्ली आइपुगे प्रधानमन्त्री ओली
तस्वीर साभार ः भारतीय विदेश मन्त्रालय
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन् । नेपाल एयरलायन्सको दिउँसो १.३५को नियमित उडानबाट करीब ३ बजे इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रेका हुन ।
प्रम ओलीलाइ विमानस्थलमा नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य लगायत भारतीय विदेशमन्त्रलायका सचिव(वेस्ट) गितेश शर्माले स्वागत गरे । प्रम अ‍ोलीका साथमा पत्नी राधिका शाक्य, विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराइ , परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागी लगायतको टोली रहेको छ ।
भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली आएका प्रधानमन्त्री ओली चाणक्यपुरीको डिप्लोमेटिभ इन्क्लेभस्थित ताज प्यालेसमा बस्नेछन् । ओली प्रधानमन्त्री ओलीको साँझ सात हुन लागेको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनेछन् । सोही समारोहमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दसँग संक्षिप्त भेटघाट हुनेछ । त्यसपछि राती ९ बजेको रात्रीभोजमा सहभागी हुनेछन् ।
समारोहमा सहभागि हुनु अघि कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट नहुने बुझिएको छ । श्रोतका अनुसार भारतीय पक्षको स्पष्ट निर्देशन नै रहेको हुँदा पहिलो दिन कुनै राजनीतिक भेटघाट नहुने भएको हो ।
बिमस्टेक अतिथि दिल्ली पुगिसके
भारतले निम्ता गरेका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरु दिल्ली आइपुगेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली लगायत बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना, भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिंग, म्यानमारका राष्ट्रपति यु विन मिन्त, थाइल्याण्डका प्रतिनिधी दिल्ली पुगिसकेका छन् । त्यसैगरि मारिससका प्रधानमन्त्री र किर्गिस्तानका राष्ट्रपति समेत दिल्ली पुगिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति भवनको फोरकोर्टमा हुन लागेको सपथ समारोह मोदीको पहिलो कार्यकाल भन्दा पनि भव्य रुपमा आयोजना गरिएको छ । २०१४को समारोहमा ३ हजार ८ सय अतिथि सहभागी थिए भने यो समारोहमा ६ हजार बढी सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह ,युपिए अध्यक्ष सोनिया गान्धी, र काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि समारोहमा सहभागी हुँदैछन् । प्रम मोदीले साँझ ७ बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदबाट सपथ ग्रहण गर्नेछन ।
ओलीको शुक्रबार तालिका
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र उनका समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीबीच शिष्टाचार भेट हुनेछ । मोदीले विमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्र लगायत किर्गिस्तान र मोरिसस गरेर ९ मुलुकका प्रमुखहरुलाइ भेटगर्ने भएको हुँदा दुइ प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानीकालगि छोटो समय मात्र हुनेछ । बधाइ दिनकालागि आएको हुँदा द्धिपक्षिय हितका विषयमा सामान्य छलफल मात्र हुने बुझिएको छ । श्रोतको जानकारी अनुसार यो भेटघाटमा द्धिपक्षिय विषयका मुद्दाहरुलाइ नउठाउनकालागि भारतीय पक्षले विशेष आग्रह गरेको छ ।
ओलीले भेटमा आफ्ना समकक्षीलाइ नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत गर्ने बुझिएको छ । शुक्रबार नै प्रम ओली भारत स्थित नेपाली दूतावास पनि आउने कार्यक्रम रहेको छ । शुक्रबार दिउँसो नेपाल एयरलायन्सको ३.५५को नियमित उडानबाट ओली स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
Previous प्रम ओली दिल्ली तर्फ प्रस्थान
Next समकक्षी मोदीको सपथमा सहभागी भए प्रधानमन्त्री ओली